Wararka - Xidhmada Hadiyadda PR ee L'Oreal Ka-hortagga Laalaabku
Hadafka abuurista xirmada hadiyaddan: L'Oreal waxay rajaynaysaa in qalabkan PR uu ka yaabin doono KOLs, kicin doona xiisahooda inay la wadaagaan kuwa raacsan oo ay gacan ka geystaan ​​​​kor u qaadida astaanta.Sidaa darteed, tixgelinta ugu horreysa ee cilmi-baarista baakadaha iyo horumarinta: sida loo soo jiito oo loo soo jiito dadka isticmaala muuqaal iyo taabto labadaba, iyo muujinta barta iibinta alaabta.
Jadwalka xaddidan ee mashruuca awgeed, si loo taageero sida ugu wanaagsan ee kooxda L'Oreal horumarinta mashruuca cusub, BXL Hal-abuurka waxa ay dejisay koox mashruuc oo gaar ah oo diiradda saaraysa horumarinta mashaariicda L'Oreal.
Siminaaro dhowr ah oo lala yeeshay kooxda L'Oreal ka dib oo ay si qoto dheer u fahmeen badeecada iyo qiimihiisu sumadda: Qaabkan REVITALIFT wuxuu diiradda saarayaa laalaab-ka-hortagga dhinacyo badan leh wuxuuna u oggolaaday macaamiisha inay markhaati ka noqdaan mucjisada gabowga.Si aan u ilaalino waxyaabaha muhiimka ah ee sheyga, dumarnimadeeda iyo muujinta shaqadeeda aasaasiga ah ee "laalaab ka-hortagga muuqda", waxaan u nimid fikradda isticmaalka "habka isbeddelka haweenka" oo ah mawduuca lagu naqshadeynayo xirmada hadiyadda PR hal abuur leh.
1. Fur ereyada muhiimka ah ee naqshadeynta
Saamaynta ka hortagga laalaabka dareen leh
Sawirada moodada ah marka la barbardhigo
Isbarbardhigga tooska ah KA HOR iyo KA DIB isticmaalka alaabta
KA HOR: laalaab muuqda
KADIB: Dib u soo noolaaday
Heerka laalaabkii oo hoos u dhacay, laalaabkii ka hortagga oo muuqda.Dhammaadkii, baakadaha alaabadu waxay dadka siisay aragti dareen leh oo ku saabsan tignoolajiyada, moodada, iyo laalaab-jabka oo dhan walba ah.
2. Saamaynta ka-hortagga laalaab-buuxa oo muuqata
Si loo gaaro tibaaxan, nashqadeeyaha BXL wuxuu isticmaalay ubax si uu u matalo haweenka, iyo laalaabka si uu u tixraaco heerarka laalaabida si loo bixiyo fikradda cabbirka.Qaab dhismeedka farsamada is-dhexgalka ee ku xiran, macaamiishu waxay awoodeen inay la kulmaan waayo-aragnimo cusub oo ka-hortagga laalaabka oo muuqaal ah.
Lakabyada isbeddelka: muraayadda daboolku isku mar way rogrogi doontaa marka ay soo jiidanayso sanduuqa gudaha, abuurista dareenka isdhexgalka ee u dhexeeya baakadaha alaabta iyo macaamiisha.Soo jiidashada lakabka ugu horreeya, laalaabyada wejiga dhinaca haweeneyda ayaa bilaabay inay baaba'aan lakabka.
Saamaynta naqshadaynta kama dambaysta ah ayaa la soo bandhigay: hab is-dhexgal ah oo lagu arki karo saameynta buuxda ee ka-hortagga laalaabka.
Waxaan u isticmaalnay qaab-dhismeedka sawir ee xirmada dibadda si aan u sawirno haweeney weji ay dhibaato ka haysato laalaabkii.Markaad ka soo bixinayso sanduuqa gudaha, shaashadda-rogista waxay isu beddeli doontaa weji yar oo qurux badan oo gabadh ah
halkaas oo laalaabku isla markiiba baaba'aan ka dib markii la soo saaro alaabada, taasoo muujinaysa isbarbardhig dareen leh ka hor iyo ka dib isticmaalka.
Naqshadaynta xirmadan waxay si fiican u soo gudbisay sifooyinka badeecada ee "la-laalaab-ka-hortagga muuqda" iyo "ka-hortagga laalaab-jajabka badan."Waxaa la rajaynayay in qalabkan is-dhexgalku uu si toos ah u muujin doono saamaynta mucjisada ah ee laalaab-yaraynta iyo gabowga ka hor iyo ka dib isticmaalka badeecada oo uu macaamiisha u keeno khibradda ugu toosan ee xiisaha leh ee ka hortagga laalaabka.
Hore: Naqshadeynta Baakadaha Soodhaha iyo Calaamadaynta
Xiga: Sanduuqa Lady M Mooncake